Isihlangu sikaAndrew Wiggins sikaTyikityo samva nje sibi - Ngaba ngabom kunjalo? - I-Nba
Isihlangu sikaAndrew Wiggins sikaTyikityo samva nje sibi - Ngaba ngabom kunjalo?
Izolo, ifoto yekhathalogu yesihlangu esitsha sika-Andrew Wiggins se-Adidas - i-Crazy Explosive PE-yakhutshwa kwi-Twitter, kwaye ngesiqhelo, impendulo ye-intanethi yayikhawuleza njengoko yayingenanceba.
Yayilulungelelwaniso lokomoya kwi-Under Armour yesikhumba-iselfowuni-holster-esile, i-matinee-ekhethekileyo-esile, i-gelatin dessert yasimahla ngokuthenga-iesile I-Curry 2 i-lowtops ebesicotha ukugcoba kubushushu obuphakathi ukuya kwiiveki ezimbini ngoku . Iphiko le-Timberwolves jikeleza okwesibini kwisihlangu sokutyikitya kunye ne-Adidas yaqhuba kakubi kwinkundla yeClassic okanye iTrash. Zijongeke ngokusisiseko njengabantu abakwi-80s abacinga ukuba iiteki ziya kubonakala ngathi kwixesha elizayo, ngaphandle kokuba akukho nto yokuzibopha - nangona kukho ngu Impembelelo engacacanga kaKeith Haring. Khawufane ucinge ukuba ii-Curry 2s ziye zaqhekeka kubi kwaye zahamba zaya kwikhabhathi esecaleni ukuze zilandele isifundo seBob Ross, inyathelo ngenyathelo.
Ukunyaniseka, iifoto zekhathalogu zihlala zingathandeki; njengaxa ikhamera ejonge ngaphambili kwifowuni yakho ikubamba ungalindelanga. Kodwa emva kokujonga kwezi bhutsi zenyanga zingashukumiyo kwimizuzu emihlanu engaphazanyiswanga, kwakunzima ukungacingi ukuba uyilo ngenjongo imbi. Umntu othile kwindawo ethile emgceni wayefanele azi ukuba ugculelo, olungenakoyiswa luyeza, olungenakulunga kwishishini, ke mhlawumbi kuxhamle i-Adidas ngandlela thile? Ngaba iimfuno zethu zophendlo lwezifo zokuba sifumane ezi ziqhulo ziqhuba ukuthengisa? Ngaba isenzo sokugqibela kulo mdlalo weenxalenye ezintathu sigqiba ngokuthenga okuhlekisayo?
Ndiyathetha, bekukho ixesha apho abanye abantu ababenomdla bazama ukufakela isibini Iipesenti ezili-100 ziyinyani Damn Daniel White Vans nge $ 400,000 kwi-eBay ngenyanga okanye emva kokuba i-intanethi iguqule iDamn, uDaniel waba yinto. Olunye uluhlu luye lwaphuma malunga nelo xesha kuluhlu lweedola ezili-10 000 ukuya kuma-25,000 eedola - izihlangu ezigqwesileyo ngequbuliso, ngokukhawuleza . Ukuthengisa ngokuthe ngqo-kubathengi kuye kwehla ngeepesenti ezingama-20, ngokwe Ushishino ngaphakathi . Ukuthengiswa kwe-Intanethi kukhuphe iipesenti ezingama-30.
Impembelelo yeDamn Daniel inokwenzeka ukuba ikhethekile, kodwa nokuba imali yenkcubeko evela kule nto siyenzileyo ayihambisi ukuthengisa, kulungile. Akukho mfuneko. Nangona zifakwe kwi-intanethi, izihlangu zikaSteph Curry zithengisa kwiindawo ezinkulu. Nkqu neSki Lodge 2.5s . Ngo-Epreli, Phantsi kweArmor ingxelo $ 264 yezigidi Kwikota yokuqala yokuthengisa izihlangu-ukuphuculwa kweepesenti ezingama-64 kwikota enye kunyaka ophelileyo. Uninzi lolo luyabulela kumgca wokutyikitya weCurry, owasungula ngoJanuwari 2015.
Ke, kungothusi mntu, konke oku kungxola sikwenza kwi-intanethi malunga ne-Nursing Home 1s kunye ne-DeWalt x Under Armor collabs, ngelixa kumnandi, kwaye kufanelekile, kuyinyani nje ebhakedeni. Ngaphantsi kwesiXhobo kuyaphola. I-Adidas iyaphola.
Kwakhona kunokwenzeka ngokupheleleyo ukuba ezi ziqhushumbisi ziPhambi nje kwexesha labo, njengekaKobe Bryant Ke Inkunkuma Baziphambanisa ii-8s . Emva kwayo yonke loo nto, ukuba ufumana ii-non-PE editions kumbala omnyama-omnyama kwaye uzibeke endaweni yesiqalo seyure yegolide, abajongi eyoyikisayo .
iziqendu ezimbi kakhulu
charlie musa ukuntywila!
UJason witten ngomvulo webhola ekhatywayo ebusuku
lin-manuel miranda '
I-lars ye-trier misogyny
thintela umdla wakho kwiziqendu ezilungileyo